“ထွက်မြောက်ခြင်း” အသစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ၎င်း၏ သမ္မာကျမ်းစာတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ကျွန်တော့်အဖြေ | My Answer to the New "Exodus" Movie and Its Attack on the Bible! | Real Conversion
“ထွက်မြောက်ခြင်း” အသစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ၎င်း၏ သမ္မာကျမ်းစာတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ကျွန်တော့်အဖြေ
ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“သင်တို့သည်မောရှေ၏စကားကိုယုံလျှင် ငါ့စကားကိုမယုံဘဲမနေနိူင်ကြ။အကြောင်း မူကား၊ မောရှေသည်ငါ့အကြောင်းကိုရေးထား၏။ သူရေးထားသောစကို သင်တို့ သည်မယုံလျှင်၊ ငါ့စကားကိုအဘယ်သို့ယုံနိူင်မည်နည်းဟု ယုဒလူတို့အား မိန့်တော် မူ၏။” ( ယောဟန် ၅း ၂၆-၂၇ )
ကျွန်တော်သည် အသက်ဆယ့်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်တွင် အမှုတော်မြတ်တွင် အတိအကျ ခေါ်ခြင်း ကိုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုအချိန်က ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးပါ။ ကျွန်တော်ကို တရားဟောဆ ရာအဖြစ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိကြောင်းကို သိတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် ကောလိပ်ဘွဲ့ရသင့် ကြောင်းလူတို့ကဆိုကြသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး နှစ်ရှည်လများ ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် အထက်တန်းကျောင်းကျရှုံးသည်ဖြစ်၍ ကောလိပ်တက်ခွင့်မရှိပေ။ အထက်တန်းပညာ ကိုပြန်လည်သင်ယူခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်အ နေဖြင့်အသက်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်“ဆိုးသောကလေးများ” အဖို့ အထူးကျောင်းကို တက် ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် ဆိုးသောကလေးမဟုတ်သော်လည်း ထိုကျောင်းတက်မှဖြစ်မည့်အခြေ အနေဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ကျော်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထိုနေရာတွင် ကျောင်းပြီးပြီးနောက်တွင် ကော လိပ်ကျောင်းတက်ရန် စတင်စဉ်းစားလာသည်။ ဤအချိန်တွင် တရုတ်ပြည်တွင် အဦးဆုံးသာသနာပြု ဆရာဖြစ်သူ James Hudson Taylor အကြောင်းကို ဖတ်ခဲ့ရသည်။ “ထိုအမှုအရာ ကျွန်တော်လုပ် ဆောင်ရမည်၊ တရုတ်ပြည်သူပြည်သားများကြား သာသနာပြုဖြစ်လာရမည်” ဟု စဉ်းစားခဲ့သည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်မှာရှိတဲ့ ပထမဆုံးတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်နှင့် ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းသည့် အချိန်တွင် ကျွန်တော်၏အသက်မှာဆယ့်ကိုးနှစ်သာရှိသည်။ ထိုအချိန်မှာ Dr. Timothy Lin သင့်အုပ် မဖြစ်သေးသည့်အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနှစ်မိုးရာသီတွင်ပင် Biola ကောလိပ်တွင် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ငွေကြေးမရှိ၊ မိသားစုထံမှ အကူအညီလည်းမရဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နံနက်ပိုင်းတွင် ကောလိပ်ကျောင်း တက်ပြီး ညနေတွင်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၌ကားလည်းမရှိသည်ဖြစ်၍ လော့စ်အိန် ဂျယ်မှ ကောလိပ်ကျောင်းရှိရာ လာမရီဒါအထိ ဘစ်ကားစီးခဲ့ရသည်။ မည်ကဲ့သို့ကောင်းစွာ သင်ယူမည် ကိုလည်းမသိပါ။ နံနက်ပိုင်တွင်ရှည်လျားသောခရီးနှင့် ညနေပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ချိန်များသည် ကျွန်ုပ် အတွက်ခက်ခဲသောလက်ကိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် Biola ကောလိပ်တွင် အတန်းပေါင်းများစွာ ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် စာသင်နှစ်ဝတ်တစ်ခုပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းမှထွက်ခဲ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုကောလိပ်တွင် ကျွန်တော်ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သည့် အရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဘိုင်အိုလာတွင် စာသင်နှစ်ဝတ်တစ်ခုစီတွင် ဘုရားကျောင်းနံနက်တိုင်းတွင် အစဉ်လိုက်တရား ဟောခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုစာသင်နှစ်ဝတ်တွင် တရားဒေသနာအဖြစ်တာဝန်ကျသူမှာ Dr. Charles J. Woodbridge ( ၁၉၀၂-၁၉၉၅ ) ဖြစ်သည်။ သူသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ပါရှာတဲနာရှ Fuller Theological Seminary တည်ထောင်သူနှင့်စာချသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် Dr. Woodbridge သည် လွန်ခဲ့သည် လအနည်းငယ်က Fuller ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုကျောင်းသည် လီဗရယ်အယူဝါဒဆီသို့ရောက်နေခဲ့ပေသည်။
ဘိုင်အိုလာတွင် ဘုရားကျောင်းအစီအစဉ်အတွင်းတွင် Dr. Woodbridge က ၂ ပေတရု တစ်ခုလုံးကို ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောပြောခဲ့သည်။ သူ၏မိဘများသည် သာသနာပြုများဖြစ်၍ တရုတ်ပြည်တွင် မွေးဖွါးသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ကျွန်တော်အတွက် အလွန်ပင်အရေးကြီးလှသည်။ ကျွန်တော်ဘဝတွင် ကြားဖူးသမျှတရားဒေသနာထက်ပို၍ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ပေ ၂း၁-၃ ကိုရောက်လာသောအချိန်တွင် Fuller ရှိ လီဗရယ်အယူဝါဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးဟောကြားလာ ခဲ့ပါသည်။ သူသည် မိုက်မဲသောသူမဟုတ်ပါ။ သူသည် Princeton တက္ကသိုလ်တွင် အသင်းတော်သမိုင်း
ဖြင့် ပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး Duke တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက်၍ ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ Dr. J. Gresham Machen ကသူ့ကို ပရက်ပက်တီးရီးယန်း၏နိူင်ငံခြားသာသနား၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခွဲခန့်ခဲ့သည်။ သူ၏တရားဒေသနာကို နားထောင်ပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော် သည် ကယ်တင်ခြင်းရသည်သာမက ကျမ်းပိုဒ်တိုင်းဘုရားသခင်၏မှုတ်သွင်းခြင်း၊ ဓမ္မဟောင်းဟေဗြဲ ကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ဂရိကျမ်းစာတို့သည် အမှားအယွင်းလုံးဝမရှိကြောင်းကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံလာခဲ့ သည်။ ဘိုင်အိုလာတွင် နှစ်ဝတ်သာတက်နိူင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မှာ ထိုနေရာတွင်သာဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် ကျွန်တော်သင်ယူလေ့လာရသည်မှာ ထိုနေရာတွင်သာဖြစ်သည်။ ပထမရာစုက ဖာရိရှဲများသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသော် လည်း ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော ပရောဖက်ပြုချက်များကိုမူ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ပြောကြရမည်။
Dr. W. A Criswell က “ယေရှု၏ဖော်ပြချက်တွင် ကောက်ချက်ချထားသောအငယ်ဆုံးမှာ မောရှေသည် သမ္မာကျမ်းစာကို အမှန်တကယ်ရေးသားသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သူရည်ရွယ်ရေးသား ထားသောသူကို ဂျူးများသိရှိထားကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ဖြစ်သတည်း” ဟု ညွှန်ပြထားပါသည်။ (The Criswell Study Bible; ယောဟန် ၅း ၄၅-၄၇ မှတ်စု ) Dr. R. C. H. Lenski က “ ဂျူးများသည် မောရှေပြောသောစကားကို မယုံကြသောကြောင့် ယေရှုပြောသောစကားကို မယုံကြည်ကြပေ။” (The Interpretation of St. John’s Gospel; ယောဟန် ၅း ၄၅-၄၆ ) ထို့အပြင် Dr. Charles John Ellicott က “သူတို့သည် မောရှေကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူ့ကိုလည်း မယုံကြည်ကြပေ” ဟုဆိုပါသည်။ (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible; ယောဟန် ၅း ၄၆ မှတ်စု )
Dr. Lenski က ယေရှု၏စကားများမှာ “လူသားအစွမ်းအစဖြင့် ကြိုးစားရှာဖွေခြင်းတည်းဟူသောအရာ ထက်သာ၍ တန်ဖိုးရှိပြီး ဝေဖန်မှုများကိုလည်း ကြံကြံခံနိူင်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ (Lenski, ibid.) “သင်တို့သည်မောရှေ၏စကားကိုယုံလျှင် ငါ့စကားကိုမယုံဘဲမနေနိူင်ကြ။အကြောင်း မူကား၊ မောရှေသည်ငါ့အကြောင်းကိုရေးထား၏။” ( ယောဟန် ၅း ၄၆ )
ယခုတွင် ကျွန်တော်တို့သည် “ထွက်မြောက်ခြင်း၊ ဘုရားများနှင့်ဘုရင်များ” ဖြစ်သည့် ဤဇာတ်ကားကို လက်ဝယ်ရှိကြသည်။ ၎င်းကို Ridley Scott က ညွှန်ကြားပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဝဲစကီးပဲဒီးယားအရ “၂၀၁၃ တွင် Ridley က သူသည် အားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။” ထို့ကြောင့် Dr. Albert Mohler ပြောဆိုခဲ့သည့် “ရုပ်ရှင်ထဲတွင် ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောမောရှေသည် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ကိုမလုပ်ဆောင်နိူင်သူဖြစ်သည်” ဟူသောစကားမှာ အံ့ဩစရာလုံးဝမရှိပေ။ (www.albertmohler.com) လုံးဝအံ့ဩခြင်းမရှိပါ နှင့်။ ဇာတ်ကားကိုထုတ်ဝေရာတွင် တွဲဖက်ထုတ်ဝေသူနှင့်ဒါရိုက်တာမှာ အနုပညာသမားျဖစ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူတစ်ယောက်က သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ခရစ်တော် ၏သက်သေခံချက်နှင့်ဆီလျော်မှန်ကန်မှုရှိသောထွက်မြောက်ခြင်းဇာတ်ကားကို အဘယ်သို့ ထုတ်လုပ်နိူင်မည်နည်း။အသက် ဆယ်တစ်နှစ်အရွယ် Ridley Scott က ဘုရားသခင်ကို ပုံဆောင်ထားသည်မှာ အံ့ဩစရာမရှိပါ။ သူက “ ကပ်ဆယ်ပါးနှင့် အံ့ဩဖွယ်ရာများကို သဘာဝတရားဖော်ပြချက်ဖြင့် သဘာဝလွန်မဟုတ်ဘဲ တင်ပြချက်သည်လည်း” အံ့ဩစရာမရှိ ပါ။ (Mohler, ၎င်း ) သို့သော် Dr. Mohler က “သမ္မာကျမ်းစာက ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကို သမိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သမိုင်းသည် ထိုသမိုင်းတွင်သည် အခြေခံတရားတွင်အုတ်မြစ်ချတည်ဆောက်ထားကြောင်း” ဆိုပါသည်။ ( ၎င်း )
သို့ရာတွင် Ridley Scott က “မောရှေသည် အသက်ရှင်ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ နှင့် ထိုထွက်မြောက်ခြင်းသည် သမိုင်းအရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်း” ကိုယုံကြည်လက်ခံသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ သူသည် သူ၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို သိပ္ပံဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုကြည့်နေ သကဲ့သို့အကြိမ်များစွာ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲကြည့်နေသဖြင့် ဘာသာတရား၏သတင်းအစီအစဉ် များကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ (Mohler, ၎င်း ) ထို့ကြောင့် Mr. Scott က သခင်ခရစ်တော်မိန့်မူချက် ကိုဆန့်ကျင်လျက် မိမိအတွက်စီရင်ခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားပါသည်။
၂၀၀၁ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၃ ရက်ထုတ် Los Angeles Times ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် “ထွက်မြောက်ခြင်းပုံ ဝတ္ထုအကြောင်းသံသယဖြစ်ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘာသာတရားစာ ရေးဆရာ Teresa Watanabe ကရေးသားခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးမှာ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး “ထွက်မြောက်ခြင်း၊ ဘုရားများနှင့်ဘုရင်များ” ဇာတ်ကားကို ထိန်းသိမ်း နှင့်တူညီပေသည်။ Times ဆောင်းပါး၏အဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီး အဖြေပေးမူ မည်။
ပညာရှင်များစွာတို့က မောရှေအကြောင်းသည် လုံးဝမဖြစ်နိူင်ခဲ့ပါ၊ ဂျူးတို့ သည်လည်းမေးခွန်းများမေးလျက်ရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကြသည်။
ထိုပညာရှင်များ၏နာမည်များကိုမူ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဂျူးဘာသာရေး “ခေါင်းဆောင်” တစ်ဦးကိုသာလျှင် ကိုးကားထားသည်။ သို့သော် ဆောင်းပါးကမူ အော်ထောဒေါစ် တရာဇရပ်မဟုတ်ဟုလည်းမပြောပါ။ ဆောင်းပါးက ဆရာသည်လည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ကိုအလေးအနက်ထားပြီး အောထောဒေါက်စ်ဆရာများကဲ့သို့ မကျင့်ဆောင်သူများဖြစ် သည်ဟုလည်းမဆိုပါ။ ဆောင်းပါးက Trinity Evangelical Divinity School ကျောင်းမှ Dr. Gleason Archer၊ Talbot School of Theology ကျောင်းမှ Dr. Charles L. Feinberg၊ Taiwan ရှိ China Evangelical Seminary ဥက္ကဌဖြစ်သူ Dr. Timothy Lin စသဖြင့် ဓမ္မဟောင်းပညာရှင်များကဲ့သို့သောသူများရှိသည်ဟု မဆိုပါ။ ဤသူများက ထွက်မြောက်ရာကျမ်းသည် မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟုသွန်သင်ပေးခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် Times စာစောင်တွင် သူတို့ကဲ့သို့လူများကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဓမ္မပညာအရတွင် ကွန်ဆာဗေးတစ်သမားများကိုဖိအားပေးလျက် လီဗရယ် ကဲ့သို့ပညာရှင်များကိုဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဆောင်းပါးက ဆက်လက်၍ပြောဆိုပါသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက ဣသရေလများသည် အီဂျစ်ပြည် တွင်နေထိုင်းဖူးကြကြောင်း၊ ကျွန်ခံဖူးကြကြောင်း၊ သိနတောင်ကန္တာရတွင် နှစ် ၄၀ လှည်လည်ဖူးကြကြောင်း သို့မဟုတ် ခါနန်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးကြ ကြောင်းစသဖြင့် ထင်ရှားသည့်မှတ်ချက်မရှိဟုဆိုကြသည်။
ဤအရာကို ကျွန်တော့်သားလေး Leslie ကိုဖတ်ပြခဲ့သည်။ သတင်းစာထွက်လာသော အခါ၊ သူသည် အသက်၁၇နှစ်သာရှိသေးသည်။ ထိုအရာကိုဖတ်သည်နှင့်ချက်ခြင်း ကျွန် တော်သား လေးက “(ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင်ရှိသော) ဤအရာများသည် တရုတ်ပြည်၊ သို့မဟုတ် အင်္ဂလန်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာကြီး၏ပုံမှန်နေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် သူတို့သည် သက်သေအ ထောက်အထားများကို လွန်ခဲ့သည့်အချိန်ကတွေ့မြင်ခဲ့ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုအ ရာများမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ သူတို့တွင် စစ်ပွဲနှင့် ပဋိပက္ခများသာရှိပါ သည်။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကိုရေးသားထားသည်ဖြစ်၍ ဂျူးလူမျိုး များသည် ကမ္ဘာအနှံတွင် နှစ်ကြိမ်လောက်ကွဲလွင့်ကြဟန်ရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရှိသောနေရာများကို နှစ်ထောင် ပေါင်းများစွာက လုယူဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ် ပျက်ခဲ့ပြီးနောက် အထောက်အထား များကိုတွေ့မြင်ရန်မမျှော်္္လင့်သင့်တော့ပါ။” ထိုအမှု အရာကိုပြောဆိုသောအချိန်တွင် မိမ ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသည်မှာ “ဤဆယ်ခုနှစ်သားသည် လီဗရယ်များ၏ဝေဖန်မှုထက်ပင်ဦး နောက်ရှိကြောင်း စဉ်းစားမိပါသည်။”
Rabbinical Council of Orange County ဥက္ကဌဖြစ်သူ David Eliezrie စကား ကို ဆောင်းပါးတွင်ကောက်နှုတ်ထားပါသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ထိုရှေးကောင်းသုတေသနပညာရှင်က ထွက် မြောက်ရာကျမ်းက ဒါဝိဒ်မင်းကြီးအသက်မရှိခဲ့ဟု ကျွန်တော်တို့အားပြော သည်ဟုသံသယရှိသောသူဖြစ်သည်။ ဣသရေလတိုင်းပြည်တွင် ဒါဝဒ်မင်း ကြီး၏အကြောင်းဖော်ပြချက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုရာတွင် ဤသီအိုရီ သည်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့သည်။ (Jewish Journal, ၄/ ၂၀/၀၁/၊စာ-၁၁ မှ ကောက် နှုတ်ထားပါသည်။)
ဣသရေလတိုင်းပြည်တွင်ရှိသောကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက ကျွန်တော်ကိုစာရေးသည် မှာ Times ဆောင်းပါးမထွက်မှီနှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပြီး ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များ သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏အချိန်ကာလက ဒါဝဒ်မင်း၏စကားပါရှိသည့် မြေအိုးအပိုင်းအစကို တူးဖော်ရ ရှိခဲ့ကြပါသည်။
Dr. W. A. Criswell သည် အလွန်ထူးချွန်သောပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ သည် Louisville၊ Kentucky ရှိ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကျမ်းစာကျောင်းတွင် ကျမ်း စာဘာသာစကားဖြင့် ပါရဂူဘဲ့ြရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။သူသည် စာရေးဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ် ပါသည်။ အနက်ဖွင့်ကျမ်းများပါရေးသားပါသည်။ သူသည် ဒါလပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသင်းတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်သင်းအုပ်အ လုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် အကြီးမားဆုံးသော “ပရိုတဲ့တင်း”အသင်းတော် ၏ဥက္ကဌအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဓမ္မပညာကျောင်းတွင် လည်းအလွယ်တကူပင်ဥက္ကဌဖြစ်နိူင်ပါသည်။ သူ၏သမိုင်းဝင်စာအုပ်မှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟုဟောပြောရသည့်အကြောင်းတရား ဖြစ်ပါသည်။ (Broadman Press, 1969) Dr. Criswell က ဤသို့ပြောပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မောရှေသည် စာရေးသားခြင်းတီထွင်ခြင်းမတိုင်မှီက အသက်ရှင်ခဲ့ သည်ဖြစ်၍ ပထမဆုံးစာအုပ်ငါးအုပ်ဖြစ်သည့် ပညတ္တိကျမ်းကိုအမှန်တကယ်ရေး သားခဲ့သည်လားဟူသည့် မယုံနိူင်စရာအတွေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ ယခုခေတ် တွင်တွေ့ရှိရသည် အငြင်းပွါးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုသိရသည်မှာ အရှေးပိုင်း တွင် ခရစ်တော်မတိုင်မှီနှစ် ၂၀၀ဝက အနူပညာလည်းထွန်းကားခဲ့ကြောင်းသိရ ပါသည်။ မောရှေခေတ်တွင် ရေးသားထားခြင်း ဟုတ်မဟုတ် မသိရသော်လည်း မောရှေ၏ရေးသားခြင်းမတိုင်မှီ ရာစုနှစ်အဆင့်ဆင်တွင် အနုပညာများထွန်းကား ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်မှုအပေါ် အခြားရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာသက် သေအထောက်အထားကို အီဂျစ်ပြည်တွင်ခက်ခဲသောကျွန်ခံမှုများရှိနေသည့်အ ချိန်ကာလက ဟေဗြဲလူမျိုးများသည် ရမ်ဆဲစ် ၂ အတွက်ဆောက်လုပ်ပေးထားကြ သော ပစ်သွင်ဘဏ္ဍာမြို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုမြို့ကို မကြာသေးခင်က တူး ဖော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နံရံကို အုတ်ခဲများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အချို့မှာ ကောက် ရိုး၊ အချို့မှာကောက်ရိုးမပါဘဲ ထွက်မြောက်ရာ ၅း၇ တွင်ပါရှိသကဲ့သို့တိတိကျကျ ဖြစ်ပါသည်။ ဝေဖန်သူများက မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုကြသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာ သမိုင်းက မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေထူပြန်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ဆက်လက်တင်ပြလိုပါသည်။ လီဗရယ်ဝေဖန်ရေးသမားများဖြစ်ကြသည့် ရွှေတံခါး နှစ်ခြင်းဓမ္မတက္ကသိုလ်တွင် စာချနေသောသူများသည် ကျွန်တော်ထိုကျောင်းတွင်တက်နေသည့်အချိန် နှင့်ကျောင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ဟေဗြဲလူမျိုးများ အီဂျစ်ပြည်တွင်ရှိခဲ့ ကြသည့်မှတ်တမ်းမရှိဟုပြောခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ရုပ်ပုံကိုယူလာခဲ့ကြ ထွက်မြောက်ရာ အခန်းကြီး ၅တွင် သူတို့အုတ်လုပ်ခဲ့ကြကြောင်းပြောသည်ကို ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် စာချသူ အား ပိရမစ်နံရံမှယူ၍ ထိုပုံများကို စာချသူအားပြသတော်မူခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့က ကျွန်တော့်အား ကျမ်းစာကိုယုံသောသူဟူ၍ပျက်ရယ်ပြုကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအတိုက်အခံလုပ်ဆောင်သောသူတစ်ဦး ကို ဂျူးလူမျိုးများ၏သမိုင်းဆိုင်ရာမြေပုံစာအုပ်တွင်တွေ့ရှိနိူင်ပါသည်။ (The Jewish Journal, ၄/၂၀/ ၀၁၊စာ-၁၁) ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအချိန်ကာလတွင် အီဂျစ်ပြည်တွင် အုတ်လုပ်နေကြသောဟေဗြဲလူမျိုး များအကြောင်းညွှန်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အောထောဒေါက်စ်ဆရာ David Eliezrie က လီဗရယ် တို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး Times ဆောင်းပါးအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါ သည်။
သူတို့၏ဘဝပုံစံနှင့်ပညာရေးက ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကိုဆန့်ကျင်ဘက်ရှုထောင့် အမြင်များကိုဖန်တီးနိူင်သည့် စိတ်သဘောကိုဖန်တီးပါသည်။ သူတို့သည် ရွေး ချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိလာသည့်အချိန်တွင်သာ [ဓမ္မဟောင်းကျမ်း] တောရတွင်ရှိသော အရာသည်မှန်ကန်ပေမည်ဟု ဝန်ခံကြသည်။ (The Jewish Journal, ၄/၂၀/၀၁၊ စာ-၁၁ )
တဖန် Times စာစောင်သည် “ထွက်မြောက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့်ကိစ္စကိုစတင်သည့်အချိန် တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁၃ နှစ်လောက်ကဖြစ်သည်။ ဆယ်စုတစ်စုထက် ပညာရှင်များသိရှိထား သည်ထက် များနေသည်” ဟုဆိုသောအချိန်တွင် မှားယွင်းမှုတွေရှိနေပါသည်။ ထိုအမှုသည် မှားယွင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဝေဖန်ရေးသမားများသည် နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာ ကျော်လောက်ကကဲ့သို့ပင်ပြောဆိုနေကြပေသည်။ Johann Semler (၁၇၂၅-၁၇၉၁) က ဂျာမန်ပြည်တွင် သမ္မာကျမ်းစာ၏အငြင်းပွါးမှုသည် ၁၈ ရာစုကစတင်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါ သည်။ Dr. Harold Lindsell က ဤသို့ဆိုပါသည်။
သူသည် ၁၇၅၇ခုနှစ်တွင် Halle တွင် ဓမ္မပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ သည်။ သူသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ အကြောင်းအရာဆိုင်ရာအငြင်းပွါးမှုများကို မြှင့်တင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သမ္မာကျမ်းစာမှုတ်သွင်းခြင်းအယူအဆ ကိုစိန်ခေါ်သည့်အချိန်တွင် သူအဖေ၏အယူအဆမှုကွဲထွက်သွားပေသည်။ (Harold Lindsell, Ph.D ., The Bible in the Balance, Zondervan Publishing House, ၁၉၉၇၊ စာ-၂၈၀ )
Times စာစောင်က လီဗရယ်ပညာ ရှင်များသည် ထိုစာစောင်ကိုရေးသည့်အချိန် ၂၀၀၁တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁ဝမှ ၁၃နှစ်လောက်တွင် ထွက်မြောက်ရာကျမ်းရှိ အမှားအယွင်းဟုခေါ်သောအ ရာများကိုသာသိရှိခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာက အငြင်းပွါးမှုသည် ၁၉၈၈သို့မဟုတ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ မမှန်မကန်ထွက် မြောက်ခြင်းစတင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပေ။ ၁၉၇၂ နှင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ်လောက်တွင် ၁၅ နှစ်စော၍ ဤအကြောင်းအရာကို ရွှေတံခါဓမ္မပညာကျောင်းတွင် အဘယ့် ကြောင့်ကြားခဲ့ရသနည်း။ ထို့ပြင် ထိုဆောင်းပါးမပေါ်ထွက်မှီ နှစ် ၅၀ လောက် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် အောက်ပါမေးခွန်းကို Dr. Henry M. Morris က အဘယ့်ကြောင့် မေးခဲ့သနည်း။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် Dr. Morris က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ရာစုနှစ်များသို့ပြန်လည်ကြည့်ရှုသုံးသပ်သောအခါ ခေတ်သစ်ဝေဖန်မှုများမြင့်မား လာသည့်အချိန်ထိတိုင်မောရှေ၏ကောင်းမွန်သောရေးသားချက်များမဟုတ်ဟု ပေါပေါတန်တန် သံသယရှိမှုအဘယ်သူတွင်မျှမရှိမှ အဘယ်သို့ဖြစ်နိူင်ပါသနည်း။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Bible and Modern Science, Chicago: Moody Press, ၁၉၅၁၊ စာ-၁၀၂ )
ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က စတင်ခဲ့မည်ဆို လျှင် ထိုအကြောင်းကို Winston Churchill က ၁၉၃၂ တွင် အဘယ့်ကြောင့်ရေးသားခဲ့ သနည်း။ Churchill က လွန်ခဲ့သည့် ၈၂ နှစ်ကျောက်က သူ၏အချိန်ကာလက လီဗရယ်တို့၏ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများကို မောရှေနှင့်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကို အကာအ ကွယ်ပေးခဲ့သည်။ Churchill က ဤသို့ဆိုထားသည်။
မောရှေသည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သောအရာများကိုဆည်းပူးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသောအ ရာကို ကျွန်တော်တို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ် သောလူမှုရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ဘာသာရေးဝတ်တို့သည် ယဇ်ပုရောဟတ်နှင့် လူတို့၏ဒဏ္ဍာရီဆန်သောလက်ချောင်းတွင်ရှိပါသည်။ အလွန်တိကျသောရှုထောင့် က သမ္မာကျမ်းစာပုံဝတ္ထုများကိုအသုံးပြုရာတွင် ပြည့်ဝစုံလင်သောကျေနပ်မှုကိုရရှိ သည်ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တွင် သမ္မာကျမ်းစာကိုဝေဖန်သောလီဗရယ်ဝေဖန် ရေးသမားများဖြစ်ကြသည့် Dr. Dryasdust နှင့် စာချသူ Gradgrind တို့၏ရေးသား ချက်များအားဖြင့် မရွေ့မလျားနိူင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှုတ် သွင်းထားချက်အရ သူတို့ထားရှိသကဲ့သို့ ထိုအကြောင်းအရာများသည် ထွက် မြောက်ရာကျမ်းတွင်ပါရှိသည်ဟု ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြောဆိုနိူင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မျှပျက်စီးနိူင်ခြင်းမရှိနိူင်သည့် သမ္မာကျမ်း စာတွင် အမှီတဟဲပြုနိူင်ပါသည်။ (Winstpn S. Churchill, “Moses” in Amid These Storms, New York, Scribners, ၁၉၃၂၊ စာ-၂၉၃ )
Churchill သည် သမ္မာကျမ်းစာပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူသည် သမိုင်းပညာဖြင့် နိုဗယ်ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိသူဖြစ်ပါသည်။ ( ၁၉၅၃ ) သူသည် သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော် စွာ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းသည် ဒဏ္ဍာရီထက်ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံထားကြောင်းကို ကောင်း စွာသိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သူ၏သမိုင်းအမြင်က “Dr. Dryasdust” သို့မဟုတ် သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်သူထက်များစွာသောနားလည်မှုကိုရရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် အင်္ဂလန်ပြည်သား၊ အမေရိကန်ပြည်သားခေါင်းဆောင်များ၊ John F. Kennedy ၏အဖေအပါအဝင်က ၁၉၃ဝခုနှစ်တွင် “လူစွမ်း ကောင်း” ဟုထင်မှတ်ကြသော Hitler အကြောင်းကြည့်ကြပါစို့။
ဝေဖန်မှုနှင့်ပါတ်သက်သောအမှန်တရားနှင့် ထွက်မြောက်ရာရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်သော Ridley Scott တို့က ကျမ်းစာကို မယုံကြည်ကြပေ။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ တွင် အမှောင်ဖုံးသူများဖြစ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ဇာတိပကတိလူသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အရာကိုမခံမယူ။ ထိုအရာ တို့သည် မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်၏။ထိုအရာတို့ကို ဝိညာဉ် တော်အာဖြင့်ပိုင်းခြား၍နားလည်နိူင်သောကြောင့်၊ ဇာတိပကတိလူသည် နားမ လည်နိူင်။” ( ၁ကော ၂း ၁၄ )
“ဇာတိပကတိလူ” တို့၏ရှေ့မှောက်တွင် ဘုရားသခင်၏အရာကို ဝှက်ထားလျက်ရှိပါသည်။ လူသည် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးခရစ်တော်ကို အားကိုးမှုမရှိမချင်း သမ္မာကျမ်းစာရှိဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော် ကိုနားလည်ရန် မျက်စိပွင့်လင်းခြင်းမရှိနိူင်ပေ။
ယေရှုခရစ်သည် သင်၏အပြစ်အခကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် သင့်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူရန် သေခြင်းမှ ခန္ဒာကိုယ် အားဖြင့် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ခရစ်တော်က “ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်” ဟုဆိုပါသည်။( ယောဟန် ၃း ၇ ) သင်သည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံလာ သောအခါ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင်ရှိသည့် သမ္မာတရားနှင့် ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရှိ သမ္မာတရား ကိုနားလည်လာပေမည်။ အာမင်။ Dr. Chan ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုတောင်းပေးပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ယောဟန် ၅း ၃၉-၄၇
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိ”၊
Dr. B. B. McKinney, ၁၈၈၆-၁၉၅၂ ရေးစပ်သည်။ )